ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်အကဲခတ် | နိုးလော့! မေ၊ ၂၀၁၃
မိသားစုအတွက် အကူအညီ ဆယ်ကျော်သက် ကလေးကို ဆုံးမပဲ့ပြင်နိုင်ပုံ
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ရာဇဝတ်မှုတွေကနေ သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ပါ
တွေ့ဆုံ​မေးမြန်းခန်း ဂျူးအမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူ့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကို ဘာကြောင့် ပြန်ဆန်းစစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ရှင်းပြ
အတိတ်မှ ပုံရိပ်များ မဟာကုရုမင်းကြီး
သမ္မာကျမ်းစာ​ရှုထောင့် ​ဘုရားသခင်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ
ဒါဟာ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား ကြွပ်ဆတ်ကြယ်ငါးရဲ့ မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရိုး
နိုးလော့! | မေ ၂၀၁၃
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တီဂရင်ယာ တူရကီ တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေး ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗီယက်နမ် ဘစ်လာမာ ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အီတလီ အီလိုကို အေးဝေး
လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ လေဆိပ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ တားမြစ်ပစ္စည်း သန်း ၅၀ လောက်ကို သိမ်းဆည်းခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိတယ်။ (U.S. Department of Homeland Security) ၂၀၁၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တည်းမှာပဲ သေနတ် ၁၂၀၀ ကျော်ကို လေဆိပ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်။ မေ့ပြီးသယ်လာမိတာလို့ ပိုင်ရှင်အများစု ပြောကြတယ်။
ပညာရေးဌာနက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ကျောင်းပြေးတာကို တားဆီးဖို့အတွက် ကျောင်းယူနီဖောင်းတွေမှာ အီလက်ထရောနစ်ချိ(ပ်)ပြားတွေကို စတင်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ကလေးက ကျောင်းရောက်လာပြီဆိုရင် မိဘရဲ့ဖုန်းထဲမှာ စာတစ်စောင်ရောက်မယ်၊ မိနစ် ၂၀ ကျော်လို့မှ ကလေး မရောက်သေးဘူးဆိုရင် တခြားစာ တစ်စောင် ရောက်မယ်။
လူသာရင်ချာ့ခ်ျဟာ နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော်ဘာသာ မဟုတ်တော့ဘူး။ နော်ဝေးပါလီမန်က ဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့၊ ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေး ပေါင်းစပ်မှုကိုလျော့ချဖို့ မဲပေးခဲ့ ကြတယ်။
စစ်တမ်းကောက်ချက်တစ်ခုအရ၊ ချက်အလုပ်သမား သုံးပုံနှစ်ပုံက အလုပ်မှာမရှိတာတောင် အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေ၊ အီးမေးလ်တွေ၊ စာတိုတွေကို ပြန်ဖြေဖို့ တာဝန်ရှိကြောင်း၊ သုံးပုံတစ်ပုံကျော်က ချက်ချင်းပြန်မဖြေရင် ရိုင်းရာကျတယ်လို့ ခံစားရကြောင်း ပြောတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ ကျော်ကာလအတွင်း အစားအစာထုတ်လုပ်မှုက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ပြီး ဆန်နဲ့ဂျုံ တန်ချိန်ပေါင်း ၇၁ သန်းကို သိုလှောင်ထားတဲ့ကြားက ပြည်သူတွေဟာ အစားအစာခက်ခဲနေဆဲပဲ။ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ကောက်နှံတွေထဲက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပြည်သူတွေ လက်ထဲ ရောက်ရှိတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနဲ့ အလေအလွင့်ဖြစ်မှုလည်း ပါတယ်။
မေ ၂၀၁၃ | ရာဇဝတ်မှုတွေကနေ သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ပါ
နိုးလော့! မေ ၂၀၁၃ | ရာဇဝတ်မှုတွေကနေ သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ပါ